ဗိုလ်လက်ျာ သားအငယ်ဆုံး ဟု ပြောဆိုကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သူနှင့် ပြည်ခိုင်ြ? - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လက်ျာ၏ အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူဟု ပြောဆိုကာ ဝင်ရောက်ခဲ့သူမှ လိမ်လည်ပြောဆိုကာ ဝင်ရောက်ခဲ့မိကြောင်း ဗိုလ်လက်ျာ၏ မိသားစုဝင်များထံ ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ”သူတို့က လိမ်လည်မှုဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဝန်ချတောင်းပန်တယ်။ အန်တီတို့ အနေနဲ့ ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကိုပဲ လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ အေးအေး ဆေးဆေးလေးပေါ့။ နောက်ပြီး သူတို့အနေနဲ့လဲ ဝန်ချပြီးတော့ သူတို့မှားကြောင်းကို ပြောတဲ့အပြင် အန်တီတို့ကလဲ ဘာကိုဆုံးမလိုက်လဲဆိုရင် နောက်နောင် ဒီလိုမျိုးဘယ်သူ့နာမည် ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ မပြုကြပါနဲ့လို့။ အသိတရားလေးရှိပါ။ လေ့လာပေ့ါနော်။ နောက်ပြီး သူတို့အနေနဲ့ သူတို့မှားတာကို အယောင်ဆောင်မိတာကို ပြောတဲ့ဟာကို သတင်းစာထဲမှာလဲ တောင်းပန်ပေးမယ်လို့ ပြောသွားတယ်”ဟု ဗိုလ်လက်ျာ၏သမီး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်လက်ျာက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်လက်ျာ၏ သားအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ တာမွေ မြို့နယ်နေ ဦးအောင်ချိုအပါအဝင် မိသားစုဝင် လေးဦးသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသို့ ဇန်နဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဟု တာမွေမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Page တွင်တင်ပြီး နောက်ပိုင်း သတင်းမီဒီယာများအကြား ပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ် ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဗိုလ်လက်ျာ၏သားဆိုသည့် မိသားစုဝင်များနှင့် အင်တာဗျူးရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေထံ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်မှ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဗိုလ်လက်ျာ၏မိသားစုဝင်များက ဗိုလ်လက်ျာ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သားသမီးသုံးဦးသာရှိကြောင်းနှင့် ဗိုလ်လက်ျာနှင့် အလျဉ်းမပတ်သက် မသက်ဆိုင်သူတစ်ဦးက မမှန်မကန်နည်းလမ်းနှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လက်ျာ၏ သားအငယ်ဆုံးဟု အယောင်ဆောင်၍ ပါတီတစ်ခုသို့ ပါတီဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် လာရောက်ဆက်သွယ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ ၍ အများပြည်သူ သိရှိစေရန်အတွက် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီအချိန်ခန့်က ဗိုလ်လက်ျာ၏ မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ တာမွေမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေနှင့် ဦးအောင်ချိုတို့ တွေ့ဆုံခဲ့အပြီးတွင် ဗိုလ်လက်ျာ၏ မိသားစုဝင်များက မီဒီယာသို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ”ပါတီအနေနဲ့လဲ သူတို့အနေနဲ့လဲ တောင်းပန်သွားတယ်။ သူတို့ဘက်ကလဲ လိုအပ်လို့ ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒါမျိုးလုပ်မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်တယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်သွားတယ်။ ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့ပွဲလို့ ပြောလို့ရပါ တယ်။ မှားတာကို မှားမှန်းသိပြီး ဝန်ချတောင်းပန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု ဗိုလ်လက်ျာ ၏သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်ယုလက်ျာက ပြောသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လက်ျာတွင် သားအကြီး အောင်လက်ျာ(ကွယ်လွန်သည်မှာ အနှစ် ၄ဝခန့်ရှိ)၊ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်လက်ျာနှင့် ဒေါ်ယုလက်ျာ စသည့်သားသမီးသုံးဦး သာရှိကြောင်းသိရသည်။
'မင်းတို့ ထမင်းဝအောင် စားထား' စာသားပါသည့် အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်လာသူနှင့် ဝန်းရံသူများအား ရာဇသတ်ကြီး ပ??
အသက် ၈ဝ အရွယ်တိုင် ဂျူဗင်တပ်အသင်းနှင့် အီတလီအတွက် ဘူဖွန် အသင့်ရှိမည်